Purism na -ekwe nkwa ahụmịhe pụrụ iche na PureOS na ekwentị mkpanaaka ya nke Librem 5 Site na Linux
Ọchịchịrị | 09/09/2021 15:23 | Emelitere ka 09/09/2021 23:49 | Noticias
Ndị nọ n'azụ Librem 5 na nke PureOS kwadoro, egosila ndị ọrụ ya nkwa nkwa Purism nye ha sistemụ arụmọrụ arụnyere omenala ọ bụghị naanị maka uru ego nke ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ ahụ na -anya isi na ịnya ụgbọ ala pụrụ iche ezi oru dabere na obodo kama ịbụ ụdị ọchịchị Big Corp. E wezụga ịkpọtụrụ ya aha ejikọghị onye ọrụ na otu sistemụ yabụ ị nwekwara ike wepu PureOS ma wụnye sistemụ arụmọrụ GNU / Linux ọzọ dakọtara na ekwentị Librem 5 gị.
PureOS bụ sistemụ arụmọrụ GNU / Linux dabere na Debian na karịa ịbụ isi mmalite PureOS gụnyere uru dị ka nchekwa, nzuzo na nnwere onwe onye ọrụ.
N'ikwu maka nnwere onwe, Purism agbagoro oke nke ụkpụrụ sistemụ efu ya ruo ugbu a na ọ jisiri ike tinye PureOS n'ime ndepụta pere mpe nke nkesa GNU / Linux iri "n'efu" nke Free Software Foundation (FSF) kwadoro.
Iji sonye na okirikiri ime a, ọ dị mkpa ịgbaso ọnụọgụ ntuziaka ụfọdụ nke FSF nyere dị ka iji ikikere efu kwesịrị ekwesị, mmachibido iduzi ndị ọrụ gaa nweta ozi na-abụghị n'efu, ọ bụghị ijikọ ihe nchọgharị na-eme EME. , njide onwe onye, ​​wdg.
Ewubere teknụzụ PureOS n'ubu ndị dike, nsonaazụ nke ọtụtụ iri afọ nke injin dị nkọ na nhazigharị site na igwe mmadụ maara nke ọma: obodo "desktọọpụ efu", ndị na-eche banyere ịdị mma nka na mbụ na mbụ n'ọnọdụ echiche obere oge. ka "wepụta ngwa ngwa ngwa wee bulie uru." PureOS nwere ike igosi ọrụ kacha mma obodo "desktọọpụ efu" ga -enye maka igwe ekwentị Librem.
N'akụkụ ngwa, anyị na -atụkwa anya na ndị nrụpụta nọọrọ onwe ha sitere na mpaghara ụwa ga -akwado ọrụ mbụ anyị site na imepụta ngwa nke ha, na -ebugharị ngwa ndị dị adị, na melite ahụmịhe 'ụlọ ahịa ngwa' n'ozuzu ya; ikpo okwu Librem 5 na PureOS na-anọchite anya imekọ ihe ọnụ na obodo onye na-emepe emepe sara mbara (ọ bụghị "ebe a na-agụ naanị agụ", mana ezigbo ngwanrọ efu efu).
Purism na -agbakwụnye na ọ bụrụ na onye ọrụ Librem 5 na -eji PureOS, ị ga -enwe ikike imelite nchedo akwagidere, nkwalite nzuzo, ndozi ahụhụ na atụmatụ ọhụrụ na nke kachasị mkpa, mmelite nke na -agaghị emebi arụmọrụ nke ekwentị mkpanaka, nke a na -egosi Apple, nke ejidere na mbenata arụmọrụ nke iPhones ochie nke ekwesịrị ịchekwa batrị na arụmọrụ nke iPhones.
N'adịghị ka mmelite nke ụfọdụ ụlọ ọrụ nyere na -ebelata ndụ ngwaọrụ ma ọ bụ mebie ahụmịhe onye ọrụ, Purism na -ekwe nkwa na site na PureOS, ahụmịhe onye ọrụ ga -adị ka "ezigbo mmanya." Ka agbakwunyere atụmatụ na ngwa, ọ ga -akwalite ahụmịhe onye ọrụ kama ibibi ya, ka onye nrụpụta ekwentị kwuru.
Na -ekpe ikpe site na nkwa ndị PureOS kwere, ị nwere ike ikwu nke ahụ sistemụ arụmọrụ a nwere ihe niile iji dọta ndị ọrụ wee chọta ihe ịga nke ọma ebe Firefox OS dara, Sistemụ mkpanaka mkpanaka nke Mozilla mepere emepe, yana sistemụ isi mmalite ndị ọzọ emezughị. Mana agbanyeghị atụmatụ mara mma nke PureOS, ọ nweghị ike nweta ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ebugharịghị ngwa ndị kachasị ewu ewu na etinyere ngwa ọhụrụ na sistemụ. Nke a bụ ihe Firefox OS na ọbụna sistemụ ụlọ dị ka BlackBerry OS na -efu.
N'ịghọta okwu a, Purism na -agba ndị mmepe nọọrọ onwe ha ume site na mpaghara ụwa ka ha mepụta ngwa nke ha, kwaga ngwa ha dị ugbu a, ma melite ahụmịhe ụlọ ahịa ngwa.
Ọ bụrụ na PureOS nwere ike merie ihe isi ike a nke meriri ọbụna nnukwu ọrụ, Purism ga -edozikwa nsogbu na -adịgide adịgide nke nwere ike bụrụ breeki na mgbasa nke PureOS: nnweta nke Librem 5. N'ezie, ọtụtụ bụ ndị ọrụ nyere ọrụ. Librem 5 ruo ọtụtụ afọ, mana ha ka na -eche maka nnyefe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Purism na -ekwe nkwa ahụmịhe pụrụ iche na PureOS na mkpanaka Librem 5 gị
Luciano Alonso oyiyiholder oyiyi dijo
Ma ọ bụ nsogbu ọzọ bụ uru nke ngwaọrụ ahụ. Oké ọnụ. Mbubata na ma ọ bụ Brazil adịghị mma, dollar dị oke ọnụ, mkpụrụedemede, wdg, wdg.
Zaghachi Luciano Alonso
Firefox 92 na -abịa na AVIF na WebRender nkwado maka onye ọ bụla